Ayaan Hirsi oo Meher la aan Wiil ugu dhashay Wariye Caan ah | Somalisan.com Home
Ayaan Hirsi oo Meher la aan Wiil ugu dhashay Wariye Caan ah 11/11/2012 3:13:00 sida ku dhacday Ayaan Hirsi Magan oo quusteedu ay gaaratay inay dhaqtarkeeda ka codsato inuu ukunteeda qaboojiyo si ay u isticmaasho marka ay nin hesho. Hase yeeshee uu ka diiday, una sheegay iney tahay 37 sanno jir qura.
Waa hubaal in badan oo dadkeenna ka mid ah, siiba dhallinyarada aysan garanaynin erayga gashaan oo tilmaamaayo habdhaqan ay soomaalidu ka soo horjeeddo, kuna kooban dad fara-ku-tiris ah. Gashaan waa naag la nool nin aan meher sharci ah dhaxmarin, ulana dhaqanto sida afadiisa oo kale.
Dhaqanka nuucaasi ahi oo khilaafsan diimaha oo idil, waxaa ku kaco dadka qaarkii sababo kala duwan darteed.
Waxaana ka mid inuu qofka uu ka quusto cid guursato, mahadsadana hadduu helo cid uu la noolaado sida ku dhacday Ayaan Hirsi Magan oo quusteedu ay gaaratay inay dhaqtarkeeda ka codsato inuu ukunteeda qaboojiyo si ay u isticmaasho marka ay nin hesho. Hase yeeshee uu ka diiday, una sheegay iney tahay 37 sanno jir qura.
Hase yeeshee, waxay quusteedii soo afjarantay bishii May 2011 gii markay New York kulantay Taariikhyahanka ahna weriyaha tvga Niall Ferguson oo Brittain u dhashay, iskuna arkeen xaflad loo qabtay 100ka qof oo aduunka ugu caansan oo ay sameeysay Time Magazine.
yaan oo tixane galmo gogoldhaaf ah la sameeysay Niall waxay sabab u noqotay inay dumiso reerkii weriyaha, oo isu dhalay 3 carruur ah oo kala jira: 15, 14 ito 10, kuna kala tagaan asaga iyo xaaskiisa Sue Douglas inkastoo uusan weli furiin dhicin.
Ayaan oo xalaal iyo xaaraan u kala soocnaynin, waxay riyadeedii muddada dheer u rumoowday 26.12.2011 oo ay dhashay wiil garac ah oo loo baxshay Thomas Hirsi oo ay haatan nuujinayso.
Sida muuqato, Ayaan oo reer galbeedku ku sheegaan dhedigyahanad (feminist) u dhaqdhaqaaqto xuxuuqda haweenka waa tan dumisa guryaha dumarka kale, farxadooda baabiìso, weelkoodana gambisato. Wax xiriir ah oo ay haweenka la leedahayna habayaraatee ma jiro, siiba kuwa muslim ah .
Weriye Niall Ferguson oo Ayaan duufsatay 16dii sanno ee la soo dhaafay, wuxuu qoray 16 buug, wuxuuna sameeyay 6 musalsal tvga, waxaan sannad walbo soo galo dakhli dhan 5 million. Waxcaase ka dambayso Ayaan. Naill oo 48 sano jir iyo Ayaan oo hada 42 sani jir ah ayaa la arki doonaa meesha ay isla gaaraan.